अम्बादत्त भट्ट प्रशंसा संरक्षण समूहका संस्थापक एवम् वर्तमान अध्यक्ष हुन् । २०५५ सालमा स्थापित प्रशंसा समूहले राजधानी काठमाडौंमा हरेक वर्ष गौरा पर्वको आयोजना गर्दै आएको छ । सुदूर तथा मध्यपश्चिमका मौलिक पर्व गौराको साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक महत्व छ । दुई दशकदेखि काठमाडौँमा गौरा पर्व आयोजना गर्दै प्रशंसा समूहका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टसँग अमरवाणीका संवाददाता अभिषेक जोशीले गरेको कुराकानी:
लामो समयदेखि राजधानीमा वर्षेनी गौरा पर्व आयोजना गर्दै आउनु भएको छ,यसमा अन्य संघसस्थाको पनि साथ सहयोग पाउनु भएको छ ?
सुरूका दिनमा प्रशंसा समूहले मात्र गौरा पर्व आयोजना गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले अन्य संस्थाहरूलाई पनि समेटेका छौँ । हाम्रो नेतृत्वमा सह—आयोजक बनेर थुप्रै संघ/संस्थाले सहयोग गरिरहनु भएको छ । यसले गर्दा गौरा मनाउन सहज भएको छ । सबैको सहयोग र सहकार्यले गर्दा सुदूर तथा मध्यपश्चिमवासीको यो पर्वले राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ ।
जुन रितीथिती अनुसार सुदूर तथा मध्यपश्चिममा गौरा पर्व आयोजना गरिन्छ, यहाँ पनि त्यहि विधि बमोजिम मनाउने हो ?
गौरा पर्वको मौलिकताबारे हामी सचेत छौ । उता (सुदूर र मध्यपश्चिम) मा मनाउने र यता मनाउनेमा केही भिन्नता छैन् । सुरूका दिनमा कालीकास्थानमा केही परिवारहरूले गौरा मनाउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ चाहिँ भिन्नता थियो । उहाँहरु गौराको एक दिन एक जना पण्डित बोलाएर मनाउने गर्नुहुन्थ्यो । तर, हामीले त पञ्चमीदेखि बिरुडा भिजाउने,गौरा ल्याउने र विधि बमोजिमको पूजाअर्चना गर्ने गरिराखेको छ । जिल्ला–जिल्लाको गौरा मनाउने चलन भिन्न–भिन्न छ । हामीले त्यसमा एकरुपता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
गौरा कहाँ सेलाउनु हुन्छ ?
वागमती किनारमा लगेर महिलाहरूले सेलाउनु हुन्छ ।
टुँडिखेलमा आयोजना हुने गौरा कस्तो हो नि ?
खासमा टुँडिखेलमा गौरा देवीको प्रसाद बाड्ने कार्यक्रम मात्र हो । प्रसाद वितरणका लागिमात्र १ दिन त्यहाँ जाने हो । बाँकी गौरा ल्याउने देखि लिएर पूजाअर्चनाको सबै काम कोटेश्वर महादेवको मन्दिरमै गरिन्छ । खुला ठाउँमा प्रसाद वितरण सहज होस भनेर टुँडिखेलमा जाने गरिएको हो । त्यहाँ पनि डेउडा खेल्नेदेखि छलिया नाच्नेसम्मका कार्यक्रम हुन्छन् । यसले सबैलाई संस्कृतिको माया साट्ने र आफ्नै गाँउघर पुगेको झल्को दिन्छ । यसपल्ट भोलि (सोमबार) टुँडिखेलमा गौरा आयोजना हुनेछ ।
टुँडिखेलमा गौरा व्यवस्थापनमा सधैं कमीकमजोरी हुन्छन् किन ?
व्यवस्थापन सकभर राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्ने कोशिस गरिराखेका छौँ । तर, त्यति ठूलो समूहमा सबै जनालाई खुसी राख्न सकिन्न । सबैले मञ्चमै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर राखेका हुन्छन् । हामीले एक दिन या दुई दिनमा लागि मञ्च लिन्छौँ । खानेपानी तथा शौचालयको समस्या छ । यस्ता समस्या भईरहेका हुन्छन् तर हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छ । हामी आपसमा पैसा उठाएर कार्यक्रम गरिराखेका छौँ । कसैले प्रायोजकको रुपमा सहयोग पनि गरेका छन् । आर्थिक पक्ष कमजोर भएको व्यवस्थापनमा केही कठिनाई छन् ।
यस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दैन ?
सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक रुपैँया पनि सहयोग आएको छैन । पर्यटन बोर्डले अलिअलि सहयोग गर्ने गर्दथ्यो तर यसपाली त्यसको पनि टुङ्गो छैन । सरकारबाट सहयोगको हामीले पहल चाहिँ गरेका छौँ तर आजसम्म सहयोग आएको छैन । सहयोग प्राप्त हुन सकेको भए हामी पनि भव्यताका साथ गौरा मनाउँथ्यौँ । अहिलेसम्म आफैँ आफैँ आर्थिक सहयोग संकलन गरेर कार्यक्रम गरिराखेको स्थिति छ ।
०५५ सालबाट निरन्तर गौरा आयोजना गर्दै आउनु भएको छ ? यस दौरान के–कस्ता समस्या झेल्दै आउनु भएको छ ?
२० वर्ष अघि हामीले हाम्रा अग्रजहरु र पहिलेदेखि यहाँ स्थापित रहेका संघसंस्थालाई बोलाएर गौरा मनाऔँ; सहकार्य गरौँ भनेर भनेका थियौँ । उहाँहरुले हामीलाई कलिलो उमेरका देखेर होला, यस्तो गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि, हामीले हाम्रै तरिकाले गौरा आयोजना ग¥यौँ । कार्यक्रम सफल भएपछि यस्तो पनि गर्न सकिने रहेछ भनेर धेरै जनाले हाम्रो प्रशंसा गर्नुभयो । त्यो प्रशंसाले म भित्र उर्जा थप्यो । सुरुवाती दिनमा व्यवस्थापन निकै गाह्रो थियो । मानिसहरुलाई खबर गरेर बोलाउनु पथ्र्याे । पत्रिकामा सूचना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो छैन् ।
निम्ता गर्न कोही छुटेछ भने रिसाउने गर्दथे । त्यसपछी, हामीले केही विशिष्ट मान्छेलाई मात्रै निम्ता दिने निर्णय ग¥यौँ र अन्यले आफैँ बुझेर आउनुपर्छ भन्यौँ । दुई तीन वर्ष यस्तै ग¥यौँ । अहिले कसैलाई निम्ता दिईराख्नु परेको छैन । सबै जना आफैँ आउनुहुन्छ । सबैले संस्कृतिलाई माया गरेका छन् ।
हामीले पहल गरेर गौरालाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्थापित पनि गरायौँ । ०६८ देखि सरकारले राष्ट्रिय विदा नै दिन थालेको थियो । यस वर्षदेखि सबैको छुट्टी काटेको भएर गौराको पनि राष्ट्रिय विदा काटेको छ । अहिले हाम्रो सुदुर पश्चिमको मान्छेहरु जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ, सबै ठाउँमा मज्जाले मनाउनुहुन्छ । पोखरामा सुदुरपश्चिम समाज गठन भएको छ । त्यहाँ पनि राम्रोसँग गौरा मनाउनुहुन्छ । जुनजुन ठाउँमा उहाँहरु गौरा मनाउनुहुन्छ हामीले आवश्यक सहयोग र परामर्श दिईराखेका छौँ ।
अँझै यसलाई परिस्कृत गरेर भव्य मनाउन के गर्नुपर्ला ?
यो सम्भावना छ । अहिले हामी प्रशंसा साँस्कृतिक कोष भनेर एउटा कोेष स्थापना गर्ने तयारीमा छौ । ज–जसले जति सहयोग दिनुहुन्छ । त्यस कोषमा राख्ने र त्यसबाट साँस्कृतिक पर्वहरु मनाउने र यसको लागि हामीले ६ लाख जति हामीले संकलन गरिसक्यौँ । यसलाई २५ लाख जतिको बनाएपछि हामीलाई साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न आर्थिक अभाव हुँदैन । विभिन्न चाडपर्व सबैले मिलेर मनाउने उद्देश्यले नै कोषलाई मदत गर्न हामीले अरु संघसंस्थालाई पनि हामीले भनेका छौँ ।
पछिल्लो समय युवा पिँढीमा सांस्कृतिक मोह घट्दै गएको छ भनिन्छ ? तपाईलाई के लाग्छ ?
संस्कृति हस्तान्तरणको कुरो गम्भीर छ । त्यसकारण युवा भन्दा अघि अन्य पनि एक जुट हुनुप¥यो । सबैले अपनत्वको भाव ल्याउनुप¥यो । त्यसपछि, युवाहरुलाई कसरी सहभागी गराउने भनेर चिन्तन गर्नुप¥यो । यो सबै गर्नको लागि म धेरै लामो समयदेखि कोशिस गरिरहेको छुँ ।
प्रकाशित १७ भाद्र २0७५ , आइतबार | 2018-09-02 01:32:26